Seho tokana eto Iarivo :: Hiaka-tsehatra etsy amin’ny CCEsca i Farakely • AoRaha
Seho tokana eto Iarivo Hiaka-tsehatra etsy amin’ny CCEsca i Farakely
Hanomezana fahafaham-po ireo mpankafy ny « Bà Gasy » iangalian’i Farakely dia manomana seho etsy amin’ny CCESCA Antanimena izy, ny 21 jolay ho avy izao manomboka amin’ny telo ora tolakandro. Na efa niara-nitafa tamin’ny mpankafy aza izy tamin’ny famoahana ny rakikira “Nofiko”, tsy mbola nisy kosa ny fiarahana izay nanehoana azy io, ka izay no antony nanomanana ity hetsika etsy Antanimena ity.
Roa taona teo ho eo no niaka-tsehatra irery voalohany tao amin’ny CC ESCA i Farakely. Taorian’ny famoahany ny rakikira no efa nokononkononina ity fihaonana lehibe ity. Nomaniny manokana ny fandaharan-kira, ny haingo sy ravaka amin’io fotoana io. Ireo mpitendry efa mpiaraka aminy hatrizay ary zadraharaha amin’ny fanafanana ny lanonana, toa an-dry Sefo Nonoh, Tsihoarana, Hoby, Andry Zanaray, Jack Thierry, ary Jahleky no handravaka ny feo mangany. Hisy ireo mpanakanto namana toa an-dry Mia, Nate Tex, Mahery, Laza, Alain Rabetrano hanotrona ary i Dihvin no handravaka soradihy ny fotoana rehetra.
Manodidina ny telopolo ireo hira hatolotra. Tsy hijanona amin’ilay rakikira « Nofiko », araka izany, fa hivelatra amin’ireo hira ao anatin’ny rakikira voalohany sy ireo hira niniana tsy nampidirina tao anaty rakikira. « Seho tokana ho an’Antananarivo izy ity ary tsy ho tanteraka raha tsy teo ireo mpanohana sy mpiara-miasa marobe. Ao anatin’ny fametrahana ny pitsony rehetra i Farakely ankehitriny ary mampanantena fotoana mamy ho an’ny mpankafy azy rehetra», hoy ny mpanakanto manazava.
Vono olona :: Mpiasan’ny valan-javaboahary maty nodorana